घरमा पुजा गर्दा यस्तो कार्य भुलेर पनि नगर्नुहोस्, मानिन्छ अपवित्र ! – Sandesh Press
काठमाडौँ । संसारमा मानिसहरु फरक फरक धर्म मान्छन भने धर्म अनुसारको मन्दिर, गुम्बा अथवा विभिन्न ठाउँमा गएर आफ्नो देवतालाई पुजा गर्छौ । त्यसैले तपाई हेरक दिन पुजा गर्न जानुहुन्छ भने यस्तो कार्य भुलेर पनि नगर्नुहोस् ।
– शिव, गणेश अनी भैरवलाई भुलेर पनि तुलसी चढाउनु हुँदैन ।
-स्नान नगरी तुलसीको पातलाई टिप्नु हुँदैन । शास्त्र अनुसार यदि कुनै व्यक्ति ननुहाई तुलसीको पात टिप्छ भने पुजा गर्दा यस्तो पात भगवानद्धारा स्वीकार हुँदैन ।
– तुलसीको पातहरुलाई ११ दिनसम्म बासी मानिँदैन । यसको पातहरुमा जल चढाएर पुन भगवानलाई अर्पित गर्न सकिन्छ ।
– बिहिवार, एकादशी द्धादशी, संक्रान्ति तथा साँझमा तुलसीको पात टिप्नु हुँदैन ।
– सुर्यदेवलाई शंखको जलबाट अघ्र्य दिनु हुँदैन । बुधवार अनि बिहिवार पिपलको रुखमा जल चढाउनु हुँदैन ।
-प्लास्टिकको बोत्तल वा कुनै अपवित्र धातुको भाँडामा गंगाजल राख्नु हुँदैन । गंगाजल तामाको भाँडामा राख्नु सुभ मानिन्छ ।काठमाडौँ । पुरुषहरु स्त्रीहरुसँग सम्बन्ध राख्न लालायित हुन्छन् । विवाहित र अविवाहित दुवै खाले पुरुषमा महिलाहरुको निकट हुने चाहाना उत्तिकै हुन्छ । तर सबै महिलासँग पुरुषले सम्बन्ध राख्नु उचित हुँदैन ।
Prevआज यी ७ राशिका लागि मिलेको छ भगवान श्रीकृष्णको आर्शिवाद, तपाइको राशी कुन ?
Nextभुलेर पनि नजोड्नुहोस् यी ५ महिलासँग सम्बन्ध, मिल्नेछ अन्याय र दुख